PSJTV | प्रधानमन्त्री कम्बोडिया प्रस्थान, भियतनाम भ्रमण सफल भएको दाबी (अन्तर्वार्तासहित)
Sunday 19 January 2020 | आइतबार, ०५ माघ २०७६
हनाेई : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पाँचदिने भियतनाम भ्रमण सकी आज बिहान कम्बोडियाका लागि प्रस्थान गरेका छन् । भियतनामका प्रधानमन्त्री न्गुएन सुआन फुकको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री वैशाख २६ गते भियतनाम आएका थिए ।
भियतनाममा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनाम नेपाल व्यवसायी मञ्च, हो चि मिन्ह एकेडेमी अफ पोलिटिक्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वैशाख दिवसलाई सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका साथ नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि रहेको छ । भियतनाम भ्रमणबारे राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीज्यू, भियतनामको भ्रमण समग्रमा कस्तो रह्यो ?
यो भ्रमण अत्यन्तै सफल र फलदायी रह्यो। यसका दुई पाटा थिए।
पहिलो औपचारिक पाटो सरकारको तर्फबाट र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्तीका अवसरमा ११२ राष्ट्रका प्रतिनिधिबीच बुद्धको जन्मस्थलको प्रतिनिधिको हैसियतले बुद्धका विचार, आदर्श र आजको दिनमा त्यसको सान्दर्भिकताको बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी दिनु, यी दुबै सन्दर्भबाट यो भ्रमण सफल र सार्थक रह्यो।
यो भ्रमणले अब नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कतिको सफल र सहज रहला ?
हो, नेपाल र भियतनाम लामो समयदेखिका मित्रहरू हुन् जसको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको करिब चार दशक भएको छ तर प्रधानमन्त्रीको स्तरमा यो मेरो भ्रमण पहिलो हो। यस सिलसिलामा विभिन्न पक्षसँग घनिभूत छलफल भएका छन्। अब हाम्रो कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ र सुमधुर हुन्छ। व्यापार विस्तार हुन्छ। नेपाली उत्पादनको निर्यात बढ्छ। करिब दश करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्छ। यो भ्रमणबाट ती काम हुन्छन्।
यहाँले विश्व समुदायसँग आगामी वर्ष वैशाख दिवसको कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनीमा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको तयारी के छ?
मैले यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छु र केही आन्तरिक तयारी पनि हुँदैछ।
यो भ्रमण साना र विकासशील देशको सहकार्य र एकताको लागि पनि हो कि?
अवश्य पनि, हामी हाम्रा जस्ता समानता भएका देशसँग सहकार्य र एकता अगाडि बढाउछौं। हिजोका दिनमा हामीले असंलग्न आन्दोलनलाई निकै मजबुत बनाएका थियौं, अब फेरि यस्ता सामयिक मुद्दा सशक्तरूपले अगाडि बढाउनुपर्ने छ।
यो भ्रमणको सिलसिलामा केही दुई पक्षीय सम्झौता भएका छन् अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहला?
यी सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछन्। यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनेको छ यसले आजबाटै काम शुरु गरेको छ।
एमसीसीबारे भ्रममा नपर्न काँग्रेस सभापति देउवाकाे आग्रह
यो वर्षभित्रै विद्युतीय वस संचालन हुन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल
आचारसंहिताको विषय अदालतले हेर्छ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
यसकारण असफल हुँदैछन् प्रधानमन्त्री ओली
राजनीतिक दल र नेताको संरक्षणमा क्रसर सञ्चालक, पेस्तोल देखाएर नदी दोहन
देशभर वर्षा र उच्च भू–भागमा हिमपात पर्दा जनजीवन कष्टकर
बेपत्ता आफ्ना नागरिकको जानकारी लिन कोरियाली राजदूत पोखरामा
चिनियाँ मोडलमा चल्छ नेकपाको भोटेकोसी गाउँ कमिटी, लोगो र ड्रेस अनिवार्य
आलमबारे फेरि बोल्यो कांग्रेस- ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहमा फसाउन खोजियो’
15th Dec 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । नेकपाको सचिवालय बैठक आज बिहान पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्दैछ । बैठक बिहान ९ बजे बस्ने र आज नै ...
मेष : मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला । अरूको वचन टाल्न नसक्दा दुःख पाइनेछ र खर्च हुनेछ । कार्य सम्पादन ...
14th Jan 2020 पिएसजे न्युज
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत र कस्ता निर्णय प्रशासनिक हुन् छुट्याइदिन ...